Yiba yinxalenye yaMangqina ka Yehova | News24
Yiba yinxalenye yaMangqina ka Yehova
Ungalufumana njani uxolo ? Unokulusukela njani uluphuthume ? Yintoni ebalulekileyo ekufuneka sibe nayo ukuze sibe noxolo lokwenene ?
Olu ludederhu lwemibuzo ezakuphendulwa kwindibano yosuku olunye la Mangqina ka Yehova ezakubanjelwa kwa 16 Stellenberg Road ngeCawa umhla wama 24 ku May. Kungenwa simahla kwaye nawe uyamenywa ukuba ubekho kulendibano emxholo othi: ‘FUNA UXOLO ULUPHUTHUME! nosekelwe kumazwi ka 1 Petros 3:11.
Wonke umntu wamkelekile yaye akukho mali yankongozelo iyakufunwa.
Iinkcukacha ezithe vetshe zifumane ku Luzuko Mabindisa kwinombolo engu 084 455 7316 okanye Mtutuzeli Sitinga kwinombolo engu 084 680 4013